साहित्य-सागर: June 2009
स्रस्टासंग अन्तरंग कुराकानी - जुन २००९
मैले बुझेको साहित्यमा कुनै धार र बाद छैन ।
♣ साहित्य सागरको मझेरीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
-धन्यबाद । साहित्य सागरको मझेरीमा बिसाउन काबिल सम्झिदिनु भएकोमा ।
♣ हाल कहाँ र के गर्दै हुनुहुन्छ ?
- झण्डै आधा दशकको प्रबास बसाइ पश्चात मातृभूमि आइपुगेको छु । केही पत्रपत्रिकाहरुमा छिटफुट समसामयिक लेख रचना सम्प्रेषण गर्नुको अलावा एकाध गीतहरु रेकर्ड गरिरहेको छु ।
♣ एक समयमा डायोस्परिक साहित्य बिकासमा दिन रात मरिमेट्ने तपाईं अचेल कसरी साहित्यिक क्षेत्रमा सक्रियता जनाई रहनु भएको छ ?-नेपाली साहित्यको ईतिहास नै प्रबासबाट शुरु भएको छ । डायोस्परी स्रस्टाहरुको अथक प्रयास नै आजको बिशाल नेपाली साहित्याकाश हो । सोही कुराको मनन गर्दै मैले पनि मेची काली पर बस्दा अन्य धेरै साथीहरु (जो नेपाली भाषा साहित्यको लागि मरिमेट्छन् ) सङ्गको साहित्यिक सन्सर्ग र भावनात्मक मेल सङ्ग सङ्गै आफ्नो तर्फबाट नेपाली साहित्यको लागि के कति गर्न सकिन्छ, एउटा प्रयास मात्र गरेको हुँ । हाल प्रबासी साहित्य सङ्ग उतिकै नजिक छु जस्को उदाहरण भर्खरै अनेसास मलेसिया शाखाले मेरो कार्यकारी सम्पादनमा स्मारिका प्रकाशन गरेको छ ।
♣ अलिकती फरक प्रश्न , तपाईंले आफ्नो नामको पछाडि ' छुच्चा' फुर्को किन झुन्ड्याउनु भएको ?
-यो कसैले मायालु भावमा झर्किएर दिएको उपनाम हो, जस्को उमेर झन्डै १४ बर्ष पुगिसकेको छ र मेरो साहित्यिक यात्राको निम्ती प्रेरणा पनि हो यो शब्द ।
♣ साहित्य क्षेत्र नै किन रोज्नु भयो तपाईंले ?
- कल्पना गर्नोस् तपाईं भन्दा माथि कोही केही छ भने त्यो शुन्य आकाश मात्र हो न त तपाईं भन्दा मुनि नर्क नामको कुनै अर्को संसार नै छ । यी सोचहरु साहित्य भित्र भेटिएको ज्ञान हो त्यसैले।
♣ गीत बाहेक साहित्यको अन्य कुन्-कुन् बिधाहरुमा तपाईंको कलम दौडिरहेको छ ?
-कथाले आत्मा सन्तुष्टी मिल्छ मलाई । यद्दपी हाल आएर कबिता,गजल र मुक्तकहरु पनि लेख्ने गरेको छु। कारण मन र परिबेश बीचको सन्सर्ग भित्र एउटा सिर्जना जन्मने गर्छ जस्को न्वारन जसरी-जे गरे पनि हुन्छ ।
♣ साहित्य के हो तपाईंको बिचारमा र किन लेखिन्छ ?
-साहित्य परिभाषाहरुको महासागर हो, भोगाइ भित्रको महशुस हो। त्यो महशुस जस्को कुनै आकार छैन, प्रकार छैन, सीमा छैन, परिधि छैन, रङ रोगन छैन तैपनि जीबनको लागि हावाको जतिकै महत्व छ यसको। मलाई लाग्छ साहित्य संसार परिवर्तनको खातिर लोकले कतै केही अतिनै कमी महशुस गरिरहेको बेला यसको आवाज स्वरुप लेखिन्छ ।
♣ बर्तमान नेपालको राजनैतिक अवस्था प्रति नेपाली साहित्य कतिको सम्बेदनशील भएको पाउनु भएको छ ?
-किटेर भनी हाल्नु भन्दा पनि बजारको कुरा गरौ । साहित्यिक बिचारको कुरा गरौ । वरपर डुल्दा घुम्दा भेटिएका माहोलको कुरा गरौ । के र कस्को लागि लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा जर्मनी साहित्यको प्रमुख हस्ती विश्व प्रसिद्द लेखिका 'एल्फ्राइड जेलिनेक'को बिचार उध्रित गर्न मन लाग्यो। उनी लेख्छिन् -'जब म लेख्छु ,सधैं कमजोरको पक्षमा रहने कोशिश गर्छु यसर्थ कि बलिया प्रतिको पक्षधरता साहित्यिक पक्षधरता होईन।' अब यहाँ के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाली बर्तमान राजनैतिक अवस्थामा पनि केही साहित्यिक सम्बेदनशीलता देखियो तर त्यो कमजोरको पक्षधरतामा रहन सकेन । तसर्थ साहित्यिक सम्बेदनशीलता नयाँ राष्ट्र निर्माणको खातिर सुन्य हुन पुग्यो भन्दा पनि हुन्छ ।
♣ राष्ट्र निर्माणमा नेपाली साहित्यिक स्रस्टा सर्जकहरुको बर्तमान भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ?
-एउटा खास प्रकारको आकृति र उसको भाषा मान्छेको परिचय हुन सक्ला तर सबै ती मान्छेहरु मानब होइनन् ठीक त्यसै गरी बुझ्नु पर्दछ स्रस्टाहरुलाई पनि हामीले । देश निर्माणको बर्तमान घडीमा स्रस्टाहरुको लेखकीय भूमिका हिटलर शासन ताकाकी लेखिका 'एन्ने फ्र्यान्क' को जस्तो हुनुपर्छ ।
♣ नेपाली साहित्यमा आएका धार/बादहरु प्रति तपाईंको धारणा कस्तो रहेको छ ?
-पहिलो कुरो मैले बुझेको साहित्यमा कुनै धार बाद छैन, परिधी र सीमा बीचमा खुम्च्याउन मिल्ने साहित्य खाली एउटा निश्चित स्वार्थ बोकेको गुट मात्र हो भन्छु म। यद्दपी बर्तमान विश्व साहित्य भित्र मौलाई रहेको बिभिन्न बाद अनी धारहरु बिचार सम्बद्द छैनन् भन्न खोजिएको होईन । नकार्न नमिल्ने बाद साहित्यहरु छन् जस्तै माक्सबादी साहित्यलाई अग्रगामी साहित्य पनि भनिन्छ। यसलाई हाल आएर छिद्र देखा परिसकेको यी बाद साहित्य जस्ता अरु धेरै धार र बादहरु नेपाली साहित्यमा पनि देखिसकेको छ । जसले समाज परिवर्तनको हकमा के कती भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हामीले देखिरहेका छौ। म जस्तो साहित्यमा मौलिक बुझाई बोकेर ताते गरिरहेको बालकले भबिष्यमा एउटा धार समाते भने त्यो सबै भन्दा नौलो हुनेछ ।
♣ तपाईंको लेखनमा प्राय: जसो कस्तो बिषयबस्तु हुने गरेको छ ?
-बचेँरोलाई चारो ल्याउछु भनी बिहानै गुड छोडेकी आमा चरी बेलुकी अबेर सम्म गुड नफर्के पछि अर्थात् कहिल्यै नफर्किने गरी गए पछि बचेँरोको मन भित्र कुडुलिने पिडाको बादलहरु जस्तो बिषयबस्तु माथि आधारित रहेर लेख्न मन लाग्छ।
♣ अबको नेपाली साहित्य कसरी हिडोस् भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
-अबको नेपाली साहित्यले बैज्ञानीक बाटोलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेको खण्डमा उपयुक्त बिचारबादी साहित्य हुने थियो जस्तो लाग्छ ।
♣ साहित्य लेखेर नेपालमा बाच्ने दिन आउँला त ?
-शक्तिपरक नभई सत्यपरक अनि कमजोरको पक्षधर भई लेख्न सकेमा छिट्टै ।
♣ साहित्य क्षेत्रमा लागेर के कस्तो पुरस्कार सम्मान पाउनु भयो अहिले सम्म ?
-छाम्न र थाम्न नमिल्ने तर हृदयबाट महशुस गर्न मिल्ने थुप्रै मान सम्मान र पुरस्कारहरु पाएको छु।
♣ अहिले सम्म पढ्नु भएको देशी बिदेशी साहित्यकारहरुको कृति मध्येमा कुन कृतिले अनावश्यक चर्चा पायो र किन ?
-गोर्कीको 'आमा' जस्को शिर्षकको अलवा बिषयबस्तुमा खासै साहित्यिक बिचार अनि साहित्यिक छन्द त्यति भेटिदैन ।
♣ कुनै साहित्यिक कृति प्रकाशित गर्नु भयो कि ?
-बोटैमा पाकेको फल जस्तो स्वादिलो होस्, समाज र लोकको निम्ती आफ्नो कृति भन्ने लाग्छ। छिटो पकाउनलाई फल भुसमा गाड्ने घ्रिष्टता हुन सकेन म बाट, तसर्थ तयार अवस्थामा रहेका केही सिर्जनाले पनि कृतिको रुप पाउन अझै केही समय प्रतिक्षा गर्नु पर्छ ।
♣ समग्र नेपाली साहित्य बिकासमा डायोस्परिक साहित्यको प्रभाब कस्तो देख्नु भएको छ ?
-बिश्व साहित्यको कुनै पनि हारमा पुग्न नसकेको हालको नेपाली साहित्यलाई सीमा कटाउन डायोस्परिक साहित्यको बिशेष भूमिका रहनु पर्छ, यसमा अनलाईन साहित्यलाई प्रमुख रुपमा लिन सकिन्छ किनकी अहिलेको नेपाली साहित्य बाँस साहित्यको प्रभाब हो भन्न सकिन्छ ।
♣ मोफसलका साहित्यलाई कसरी हेर्नु हुन्छ तपाईं ?
-हालको परिबेशमा मोफसलका बिभिन्न क्षेत्रहरु सिर्जनाका उर्बर भूमि साबित भएका छन् जस्तै पूर्वको बिराटनगर,झापा मध्येपश्चिमको चितवन र पश्चिमको पोखरालाई साहित्यको केन्द्र भन्न सकिन्छ । यहाँको बिचारी साहित्यले मोफसल जस्तै मेची काली पर रहेका डायोस्परिक साहित्यलाई पनि नेतृत्व गरिरहेको छ ।
♣ अन्त्यमा 'साहित्य सागर' मार्फत सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी पाठकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
- जीबन र जगत सँग मेल खाने लेखन सबै साहित्य भए पनि परिबेश सम्बद्द मेल खाने साहित्य कुन हो भनेर खुट्ट्याउने जिम्मेवारी हरेक बौद्दिक पाठकमा हुनु पर्छ तसर्थ देशको बर्तमान परिस्थितीमा कुन र कस्तो साहित्यको खाचो छ भनेर औलाई दिने काम पनि असल पाठकहरुले लिई दिनु पर्‍यो जसले गर्दा सबै लेखक साहित्यकारहरुले पनि यसको आलो अनुमान गर्न सकुन् ।
Posted by डिआर निश्छल at 5:26 AM4comments:
आऊ कफन बाँधेर
म त भन्छु सायद
प्रकृति नै मात्तिएको थियो बैशले
तब त लाली पोतेर बनै भरि
रातम्य गुराँस फुलेको त्यो समय
तिमी नै तिमी थियौ
गुराँसे माया भनौ कि
आज तिमी र म
दुई किनारा भएका छौ ।
कति पनि रहर छैन
मखमली फूल फुलाउन
बरु उजाडियोस् मनको बगैचा
दोबाटोमा लासो ओछ्याएर
तम्फुङ्नालाई अन्डा भोग दिदै
बाटो छेक्छु म तिम्रो
घुङ्गृङ् ठोकेर चारै किल्ला
माङ्गेना गर्छु 'म'
कुखुराको भोग चढाई
तङ्सिङ् राखेर तिमीबाट
मेरो माया फिर्ता लिनुछ
हो.., अब म साच्चै...!
बिजुवाको मोर्चा कसेर
उत्रेको छु रणभूमिमा
हिम्मत भए तिमी पनि
कफन बाँधेर आऊ लड्न
मुन्धुमको यो युद्द समरमा ।
Posted by डिआर निश्छल at 1:44 AM 1 comment:
मरेर बाँच्ने कुरा
सुन है सुस्तामा छिमेकी नाच्ने कुरा
बुझ है माटोलाई मरेर बाँच्ने कुरा
सिक्किम, टिस्टा हाम्रै हो तर 'थियो' भयो
कालापानी उसैलाई दियो, लियो, गयो
सोच है नेपाली सिमाना जाँच्ने कुरा
तिनीसँग बन्दुक छन् हामीसँग मुठी
सहिदका रगतहरु थोपा-थोपा जुटी
आँट है मुठीले बन्दुक भाँच्ने कुरा
Posted by डिआर निश्छल at 1:35 AM 1 comment:
-अर्जुन दुङमेन् राई
लेकतिर जाडो बढे पछि बेशीतिर झर्नु पर्‍यो
आफ्नो घर भत्किए पछि, छिमेकतिर सर्नु पर्‍यो ।
वर्षातको समय राती बाढी आउन पनि सक्छ
राँको बाली आजै साँझ, पारी गाउँ सम्म तर्नु पर्‍यो ।
गरीवकै घरमा ईश्वरले नि बास गर्नुपर्छ
पारी गाउँकै खेतालो गई, आफ्नो पेट भर्नु पर्‍यो ।
न्यायको आँखा नपुग्ने ठाउँमै दैबको आँखा पुग्छ
निशाफको कुरो नबुझ्ने, प्रत्येक पाइला हर्नु पर्‍यो ।
प्रभातको खोजीमा कति अन्धकारमा भौतारिनु
निधारमा हात राखी, कर्मै यति रै'छ भन्नु पर्‍यो ।
- बगदाद, ईराक
Posted by डिआर निश्छल at 11:24 PM No comments:
एउटा जाबो बैंश पनि भारै भयो मलाई त,
दिन त काँटे तर रात गाह्रै भयो मलाई त ।
नत मिलन नत बिछोड ब्यर्थै माया लगाएछु,
तिम्रो माया करौँतीको धारै भयो मलाई त ।
ओरालीको मृगलाई जस्ले पनि खेद्दो रैछ,
दैबबाट पनि अत्याचारै भयो मलाई त ।
एक्लै एक्लै तड्पिएर खरानी छु भित्र भित्रै,
जवानी त साँच्चै उल्का तारै भयो मलाई त ।
पहिले जस्तो कहाँ छु र ? सिकिस्त छु आजभोली,
हिजो बेलुका त झन साह्रै भयो मलाई त ।
Posted by डिआर निश्छल at 2:30 AM3comments:
तिम्रो मेरो चोखो प्रीति, ढकमक्क फूल्यो ठूली
अधेँरी मन उज्यालो छर्दै एकाएक खुल्यो ठूली
मेरो नयन भित्र तिमी, म तिम्रो मुटु भित्र छिरे पछि
सगरमाथा छुनलाई हाम्रो प्रेम त चुल्यो ठूली
रोमियो-जूलियट लैला-मजनू , केबल कथा मात्र रहेछ
हाम्रो प्रेम त नमूना भो मुनामदन भूल्यो ठूली
रात दिन एउटै लाग्ने, निरस निरस जिन्दगीमा
तिमी आयौ रंग भर्दै खुशी मात्र डुल्यो ठूली
बिश्वास आशा पलाएर, झ्यागिदै'गो मनको फाँट्भरि
मायै माया जताततै शंका ईर्ष्या सब धुल्यो ठूली
Posted by डिआर निश्छल at 2:00 AM2comments:
"हरियो भन्नु सालको पात पहेंलो बेसार
आँखाको चालले बोलाएँ मैले बुझ्यौ कि बुझिनौ ।"
संपर्क बिनाका थुप्रै वशन्तहरु बितिसक्दा पनि तिम्रो खुट खबर पाउन सकिन , न त तिमीले नै जिन्दगीको कुन सास्ती खेपिरहेको मेरो पत्तो पाउन सक्यौ होला । खोइ कुन्नी कहाँबाट दिलसराले पत्तो पाइछे मेरो टुङ्गो र चार हरफ लेखी पठाइछे सँगै तिम्रो पनि अस्पस्ट ठेगाना नत्थी गरिदिएकी रहिछे। मात्रै झझल्कोसँग चित्त बुझाईरहेको मेरो मन किन मान्थ्यो र ? तिमीसामु पुग्ने यत्ती मात्र पनि बाटो मेरो लागि काफी भइहाल्यो । पाउन त पाउछ्यौ कि पाउदिनौ तै पनि धर दिएन यो मनले । फलस्वरुप सम्झनाका यी लघु शब्दहरु तिमी सामु प्रेषित गरेको छु पुगोस् नै भनेर ।
"पानी पर्‍यो सालघारी करायो
छुपुमा छुपु धान है रोप्नु असारे पन्ध्रैमा ।"
"खोला पारी म मायाँ लाउँदिन
मिठैमा खाउँला राम्रैमा लाउँला हजुरको जीउ छउन्जेल ।"
कामको चटारोले आफ्नी प्रियालाई भेट्न समेत नभ्याउने मनहरु यतिबेला कर्तब्य छोडेर विध्वंसतिर वहकिएको देख्दा -सुन्दा मन कटक्क काटिएर आउँछ। काम गर्ने मान्छेको अभावमा सिम खेत बाँझो हुनुको पीडा एउटा कृषि प्रधान देशको लागि कती जर्जर होल कल्पना गर त ? फेरी जब मानव जीवन खाद्द्य असुरक्षा र भोकमारीले जकडिन्छ हामीले आफुलाई क्रीषी प्रधान देश को बासिन्दा भन्न लाज लाग्छ नि होइन र ? छलकपट र अपराध मिसिएको राजनीती हाम्रो देशको सबै भन्दा ठुलो अभिषाप बन्यो । संसारका सबै युवाहरु आफ्नो देश बनाउन जुटिरहेको बेला हाम्रातिरकाहरु चाहीं भत्काउन अभ्यस्त बने। सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई चटक्कै भूलेर पाखण्डी र आडम्बरी हुनु हाम्रा युवाहरुको दैनिक जीवनशैली बन्यो । आफुले नैतिक शिक्षा, जीवन पथ र कर्मभूमि देखाएर सँगै डोहोर्याएको मूर्ख पथिक आफ्नै सारथिप्रती आक्रमक बन्छ भने त्यो स्वार्थ र अवसरवादको पराकाष्ठा होइन भन्नु झन् अज्ञानिपन हो। संसारमा यस्तै बेइमानिहरुले शान्त तलाउमा ढुङ्गा हान्दा रहेछन्। मेरै परिसर यस्तो दूषित बातावरणबाट अछुत रहन सकेन। थुप्रै देखेको र भोगेको छु मैले। यस्तै परिस्थिती तिम्रो पनि जीवन भोगाइको एउटा पाटो नबनिरहेको होला भन्न सक्तिन म । बस् चनाखो रहनू ।
प्रिय बालसखा , प्रकृतिमा असार बर्षे पनि मनमा भने खडेरी लगेको लाग्यै छ । अभावले थाङ्थिलो गृहस्ती , चुहिएको छानो र चर्किएको घरको भित्तो टाल्ने उपक्रम मात्र प्रवासीनुको कारक तत्व बनेन। आँफैंले आर्जेको घरबार आफ्नै भन्न नपाउनु पो सङ्गीन पीडा बन्यो त हाम्रा लागि। देशका अधिकाशं जनताहरु खान नपाएर भोक भोकै मर्न वाध्य भईरहेका बेला हाम्रा नेताहरुलाई कुर्सी र पदका लागि लुछाचूंडी गर्दै फुर्सद भएन। कहिले कहीं त यस्तो लाग्छ - यी गिद्द हरुलाई किन कालले एकै चोटि लाँदैन ? देशको कुरा छोडेर, राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको चिन्ता भूलेर खाली ब्यक्तिगत हुने हो भने तिमी सँग बिताएका पुराना दिनहरु सान्त्वनाका श्रोत बन्ने गरेका छन् मलाई यो बिरानो माटोमा । सम्झिन्छु, तिमीले मेरा उपर दर्शाएका ती अनगिन्ती प्रेमाभावहरु । तिम्रो शुलभ नारी आत्माको पूजा गरेर कहिले थाकुँला र म ? रेडियोमा मेरा नाटकहरु बज्दा तिमी गाउँभरी खुशखबरी गर्दै हिंड्थ्यौ। नाटक बज्ने तिथी मिती पुरै कण्ठ हुन्थ्यो तिमीलाई । ठीक समयको उर्दी गर्दै रेडियो खोल्न घर-घर पुग्थ्यौ तिमी। अझ यत्ती सम्म कि कामको चापा चाप परेमा सानो हाते रेडियो पोल्टामै बोकेर मेला पात जाँदा कत्तिले तिमीलाई नक्कली पनि पनि भने होलान्। गाउँ छोडेर म हिंड्ने बेलामा पिलपिल आँशु झार्दै- 'अब त यो गाउँ मा कहिले नाटक खेल्न पाइएला र ? कहिले नाचगान गर्न पाइएला र ?' भनेकी तिमीले अझै पनि मेरो कानमा गुन्जिरहन्छ उसैगरी । जे होस्, संस्कृतिप्रतिको तिम्रो लगाव साँच्चै प्रसंसा गर्न लायक छ। विध्वंशकारी हरुलाई पाखा लगाएर आफ्नो संस्कृतिका अमूल्य धरोहरहरुलाई बचाइराख्नु तिमी जस्ता कर्मठ नारीहरुको कर्तब्य हो । यो असारमा पनि तिमीले उस्तै पारामा उही भाकामा रसिया भन्नेछ्यौ, असारे गाउनेछ्यौ । जन्मघर भए नि कर्म घर भए नि आखिर नेपाल मै त छ्यौ होल। यही त हो हाम्रो पुण्यभूमि, जन्मभूमि र कर्मभूमि। आरक्षण र अधिकारमा प्रतिशतको नारा उरालेर दाजु-भाइबीच मल्ल युद्द मच्चाउनु भन्दा क्षमता र पौरख प्रदर्शन गर्नु बढी श्रेयश्कर ठहर्छ। तिमीले त्यही गर्नेछ्यौ जो समाज हितको पक्षमा हुनेछ। मनभरी खडेरी लागे पनि असार को सिङ्गै रिमझिम तिमीलाई। तिमी मार्फत असारको रसिलो शुभकामना सबै नेपाली क्रीषक दाजुभाइ-दिदीबहिनिमा बाँड्न चाहन्छु । बस् ।
"रिमिमाझिमी पानी है पर्‍यो असारे मासैमा
हली है दाजु हल गोरु साउँदै हाँसेर गाइदिनू । "
-तिवारी भञ्ज्याङग - ४, भोजपुर
Posted by डिआर निश्छल at 2:16 AM3comments:
सुन्दर धर्तीको निम्ति भार भएँकी म
कोमल मनहरु रेट्ने धार भएँकी म ।
युगले मान्छे होईन मान्छेले युग बोक्छ
परिबर्तन रोक्ने छेकबार भएँकी म ।
धर्ती सजाउने फूल फूलै हो जिन्दगानी
फूल लुकाउने पापी झार भएँकी म ।
गुलियो-मीठो भन्छन् बचन र आनीबानी
घाँटी अठ्याउने तितो छार भएँकी म ।
जन्मेर आएको थिएँ कर्तब्य पूरा गर्न
पाखुरी हुँदाहुँदै निस्सार भएँकी म ।
सिर्जना कला गला आफ्नै हुनुपर्छ
अर्काकै खोसेर लिने जार भएँकी म ।
सत्यको मार्ग खोजी सत्यमै हिडुँ भन्थेँ
दुनियाँ देख्दा आफै लाचार भएँकी म ।
आमाको बचन नाघ्ने कोखै अगति भन्छन्
श्रृष्टीको निम्ति कतै हार भएँकी म ।
Posted by डिआर निश्छल at 8:03 AM 1 comment:
पछि शरीर कब्जा गर्छन् मनमा बास माग्नेहरु,
रित्याउँछन् बायुमण्डल मात्र सास माग्नेहरु ।
भिखारीको नकाब भित्र शिकारीको रुप हुन्छ,
असीमित चाह राख्छन् थोरै आश माग्नेहरु ।
अलिकती फुलेपछी बोलाएर भँमरालाई,
जताततै चुम्न दिन्छन् मधुमास माग्नेहरु ।
शहर भित्र भिड एक्लो,भिड भित्र मान्छे एक्लो,
झुक्क्याएर छुरा हान्छन् बहुपास माग्नेहरु ।
कोही रित्तो फर्किदैनन्,भोलि मनको बर्खास्तीमा,
उपदान र पेन्सन खोज्छन् अबकास माग्नेहरु ।
Posted by डिआर निश्छल at 7:59 AM No comments:
बुझ्नै सकेको छैन यो मनलाई मैले
मनले नै हाँक्दो रहेछ जीवन
मन नै रहेछ जिन्दगीको चालक
तर राम्रो चालक हुन सकेन किन ?
फुकाल्न मिल्ने भए
फ्याकिदिन्थेँ पर-पर धुरी कटाएर
कसैले नदेख्ने गरी यो थोत्रो मनलाई
बग्रेल्ती घाउहरु भएको कसैले देख्न सक्दैन
सबै मलाई मान्छे भन्छन्
नत्र पशु भन्न लायक छुइन म
के गर्न सकेर मैले मान्छे हुने काम ?
उधार्न मिल्ने भए
उधारी दिन्थेँ सबै सिउनीहरु
सिलाउने थिएँ टम्म मिलाएर
र लगाउन दिन्थेँ मेरी आमालाई
एउटा फूलबुट्टे गुन्यू ।
यो भोको मनलाई
पकाउन मिल्ने भए
र लगेर दिन्थेँ कर्णाली तिर
अघाएर कोही खुसी त हुने थिए ।
चिरैचिरा परेको मनलाई
बन्चरोको पासोले फुटाइदिन्थेँ
झर्यामझुरुम सिसाझैँ अझैँ
के काम विनासित्तिको
निकाल्ने थिएँ खल्यामखुर्लम
निकाल्न मिल्ने भए
गालेर तन्काउने थिएँ
तनक्क डोरी बनाएर
अनि त्यही डोरीले कोर्थे
लक्ष्मणरेखा मेरो देशको
र मान्छे बन्ने कोसिस गर्ने थिए ।
दिल सफा तर मान्छे अलि काली छ
हेर्दा सोझी भनुँ भने जाली अलि छ
देखिन्छिन् उमेरले डाँडा काटे झै
सोधुँ भने उनको सिउदो खाली छ
खुम्चन थाली गए यौवनका अंग
हेर्दा मै हुँ भन्छिन, ओठमा लाली छ
लालुपाते जोवनमा माया गासुँ कि ?
जे भए नि ज्यान त उनको डाली छ
प्रेम-प्रस्तावको हात दिनै पर्‍यो नि !
के गरुँ ? उनको रिसाउने बानी छ ।
Posted by डिआर निश्छल at 7:11 AM No comments:
कसरी गरूँ तिम्रो प्रसंशा, चाँदमा कुनै दाग छैन
तिमी बिना यो जुनीमा, जिउने कुनै आधार छैन ।
तिम्रो हासो मेरो खुसी, यसै गरी जिबन बितोस्
सुख त दुईपलको हो, सधै दु:खमा साहारा मिलोस्
कसरी देखाउँ तिम्रो माया, छाती चिरी देखाउँ सक्दिन
तिमी आयौ जिबन पाएँ, सुख शान्ति मिलेकै छ
अर्को जन्म तिमीलाई पाउँ भगवानसंग यही प्रार्थना छ
कसरी भनूँ तिम्रो बारेमा, खोट लाउने ठाउँ छैन
Posted by डिआर निश्छल at 6:18 AM No comments:
सँगै हिँड्दाहिँड्दै उनको हातमा मुठी परेको मोबाइलमा घन्टी बज्यो । निकैबेरसम्म बज्न दिइरहिन् तिनले । एकपल्ट नम्बर हेरेर नउठाई हिँडिरहिन् लुरुलुरु । पूरै घन्टी बजेर थाकेको मोबाइल फेरि थाल्यो बज्न । मैले भनेँ, 'उठाउन मीरा ! किन दुःख दिएको त्यसलाई ? बिस्तारै फोनलाई कानमा लगिन् र बोलिन्, 'हेल्लो !'
मोबाइलको आवाजसँगै उनको हिँडाइको गति धिमा भएको थियो । उनको हिँडाइको गतिलाई असहयोग गर्दै म अघि बढेँ । बिहानको कलिलो घामसँगैको सहनसकिने चीसो हावा शरीरका विभिन्न भागलाई र्स्पर्श गर्दै बगिरहेको थियो । बाटाका दुवै किनारमा आधाशताब्दि उँभो उमेर खाएका स्त्रीपुरूषहरू एक्लाएक्लै वा संयुक्त यात्रामा देखिन्थे । कोही खोच्याउँदै, कोही लट्ठी टेक्दै, कोही दौडँदै, कोही छिटोछिटो अघि बढिरहेका देखिन्थे । छिटै पुग्न खोजेझैँ देखिन्थे प्रायः सबैजना । नमस्ते गर्दै, हात उठाउँदै, कुकुर पच्छयाउँदै, धमाधम भएको थियो बिहानलाई । प्रायः एकै प्रकारका परिचित अनुहारहरू, एउटै समयमा भेट हुन्थ्यो, तै पनि कतिसँग चिनजान, परिचय आदि बिनै पनि बितिरहेको थियो समय । धेरैजसो परिचित बोल्ने सर्न्दर्भमा बन्द-हडताल र महँगीको विषय शिर्षकमा देखिन्थ्यो ।
होस्, एउटै घटनाले म दुई नारी हृदयबाट फालिएको थिएँ । मीराको मनभित्र म एउटा प्राविधिक 'लोग्ने'मात्र थिएँ । राधिकाको मनमा म निष्ठुरताको प्रतीक । आज पनि मीराका अघि मलाई गहिरा भावुक कुराहरू गर्न लाज लाग्छ । मेरो भावको नाङ्गो रूप देखिसकेकी उनका अघि मैले आफ्नै उपस्थितिलाई उभ्याउन सकिन । केवल कर्तव्यको एउटा दिग्दार लाग्दो यात्रामा हिँडिरहेकी जस्तो लाग्छ मलाई उनी । मुखले आजसम्म एक शब्द तलमाथि नबोलेकी भए पनि उनका आँखामा गृहस्थीको निरसता सधैँ उभिएको देख्छु । कैयौँपल्ट मैले माफी मागिसकेँ, तर उनी मुसुक्क हाँसेर यसरी टार्छिन्, मलाई लाजको बर्कोले गम्ल्याङ्ग छोप्छ घरीघरी ।
घरमा आइपुग्दा पनि उनको उदासी हराएको थिएन । बाटामा मैले उनलाई भुलाउन के-के, के-के, भनिरहेँ तर ती कुनै कुरा पनि उनले मन दिएर सुनेजस्तो लागेन । यही बेला खेरीखेरी के सोधिरहनु, पछि आफैँ भन्लिन् नि भन्ने सोचेँ । साँझमा घर आइपुग्दा पनि मीराको अनुहार झन् अँध्यारो थियो । मनमा चीसो पस्यो । उनलाई केले त्यस्तो पार्‍यो होला ! सधैँ कस्ताकस्ता पीर लुकाएर हाँस्न सक्ने उनी झन्झन् अँध्यारिएकी थिइन् ।
अनौठो पाराले हेरिन् उनले मेरो अनुहार । पहिलोपल्ट उनी मलाई राम्ररी चिन्न खोजिरहेकी छिन् जस्तो लाग्यो । मेरा दुबै हात समातेर बडो दयनीय अनुहारले अनुनयपूर्वक बोलिन्, 'आज ३ बजे उनको देहान्त भयो । भोलि बिहानै हस्पिटल जौँ न है ।' एकदम नै दबिएको र डराएको जस्तो थियो उनको आवाज ।
Posted by डिआर निश्छल at 6:06 AM No comments:
जति बोल्यो त्यति बोल्ने रहर लाग्न थाल्यो अब,
जसरी'नि बोल्नै पर्ने कर लाग्न थाल्यो अब ।
मिठो मिठो बोली तिम्रो अझ साथ विश्वाशिलो,
बेसाहारा हुँदा थोरै भर लाग्न थाल्यो अब ।
नगए'नि हुन्थ्यो कतै आँखाबाट ओझेल परी,
थोरै टाढा जाँदा पनि पर लाग्न थाल्यो अब ।
नचिनेकै भए पनि हेलमेल बढे पछि,
तिम्रो मन साँच्चै आफ्नो घर लाग्न थाल्यो अब ।
घट्दै छ दुरी हाम्रो, बढ्दै छन् पाईला अघि,
साह्रै नजिक भईन्छ कि ? डर लाग्न थाल्यो अब ।
Posted by डिआर निश्छल at 5:13 AM 1 comment:
तिम्रो मनको मझेरीमा बास दिन्छौ कि !
बाँच्ने रहर पुरा गर्न सास दिन्छौ कि !
तिम्रो निम्ति भएँ म त, भिखारी सरि नै
थोरै खुशी बटुल्नलाई आश दिन्छौ कि !
ओलाएकी थिएँ म त, बसन्त नै नआई
फेरि फूल भै फुल्नलाई मधुमास दिन्छौ कि !
एक्ली थिएँ भिँडमा पनि उदास थियो नयन
खुशीको आसुँ झार्न बाहुपास दिन्छौ कि !
Posted by डिआर निश्छल at 5:06 AM3comments:
-अबिरल अधिकारी 'प्रेरणा'
मेरा नयनहरु रुझेकै छन्
तिमीले आफ्नो पाइला नदीको धारमा
म... आफू मरुभूमिमा अनुवाद भएको छु ।
आँधिहुरीको बेगले हरियालीलाई
पत्झडसरी बनाए झैं
ओइलिएको पत्झड झैं बनेको छु ।
जब तिमी नै आगोको मुस्लो सरि रहिछौ
त र अनर्थ गरेँ मैले
आफ्नै मनको चुल्होमा फेरि आगो
त्यसैले त प्रिय...,
पल.... पल, हरपल ।
भूल रहेछ मेरो,
चोखो माया दिएँ तिमीलाई
मुनाको मदन झै छट्पटिए पागलसरी ।
जब कि..तिम्रो पाइला सुखको दोबाटोमा
हिड्न खोजेपछि ?
जब .... तिमीले इन्द्रेणी सपना अंगाले पछि ।
म कॉँडा माथि हिंडे पनि
तिम्रा पाइलाहरु सुकोमल मखमलीमा हिडिरहून्
तिमी बसन्तको सुगन्धमा रमी रहनु ।
Posted by डिआर निश्छल at 4:51 AM2comments:
सारिएका सिमानाहरु पुरानै डोबमा गाड्नु छ
खुम्चिएको देशको नक्सा फेरि नयाँ कोर्नु छ
टिष्टा र कांगडा फिर्ता लिन लड्न बाँकी नै छ
उठ है उठ युवाहरु हो, देशको मुहार फेर्नु छ ।
सन्धि र सम्झौतामा मेरो देशको माटो हराइरहेछ
कहिले कोशी कहिले गण्डकी पटक पटक बिक्री भैरहेछ
देशमा बिदेशीको हावी दिन दिनै बढ्दो छ
उठ है उठ राष्ट्रप्रमी हो, फेरि वीरता देखाउनु छ
उठ है उठ युवाहरु हो, सन्धि र सम्झौतामा फेर्नु छ ।
हिमालमा हिउँ रहिन्जेल एक थोपा रगत भइन्जेल
गल्ने छैनन् यी हातहरु गोली हाने नि भालाले रोपे नि
माटो नै रंगाउने छु रगतले झुक्दैन कहिल्यै मेरो शीर
उठ है उठ देशभक्तिहरु, एक जुट हुनु छ देशका शक्तिहरू
उठ है उठ युवाहरु हो, राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउनु छ ।
अर्थात्, अर्कै परिबेशमा
अझ भनौ त,
आफ्नो भन्दा धेरै पर
अर्कैको परपिडक देशमा
डङ्रङ्गै पछारेको यो पल !
यत्र तत्र लतारेको यो बेला
बिजय उत्सब मनाउदै छ
साला, यो डायोस्परा।
के जित्यो र आखिर?
दाल र चनाले मलम लगाउन बाहेक ?
एक पेग रेड लेबलले
जीबनलाई ओरालो बगाउनु बाहेक ?
बरु बजारमा खरिद बिक्री गर्छ
मान्छेहरुको यो शहरले
मानबता पनि कति सस्तो यहाँ ?
यहाँ त जिउनुको अर्थ
मर्दै पनि फेरि जिउनु हो,
अर्थात्, जिउदो मृत्यु
एकै शब्दमा जिउदो लास
फगत् बाच्नुको असीम पिडा।
ठिही झै चिसोमा पनि
तात्तिनु जानेको छ यो शहरले
शरद ऋतु अनि....
पौष माघहरु आउछन् जान्छन्
तर यो मात्तिएको शहर चिसिदैन
सडक देखि पार्कसम्म
रेस्टुरेन्ट देखि होटेलसम्म
भोजनालय देखि बेश्यालयसम्म
यो अश्लिल शहर बाह्रै मास
कामुकतामा ब्युझन मात्र जान्दछ
साला, यो पर--देश।
Posted by डिआर निश्छल at 6:02 AM2comments:
नपर दोधारमा आफ्नो मान्छे रोज मैया
मन मिल्ने जोवान साट्ने असल साथी खोज मैया
सास देऊ बास देऊ आशा देऊ जवानीलाई
आफ्नो जोवान आँफैलाई नबनाऊ बोझ मैया
खुराक देऊ सुराक देऊ बहुरस देऊ जवानीलाई
साथी संगीहरु बिच लगाईदेऊ भोज मैया
उमेरैमा लाहुर हजुर बैस छदै बिहे
बुढेसकाल हुन्न हेर अहिले गर मोज मैया
जो पनि जवान हुन्छ बैसको नसा लाग्छ
सम्हालेर राख यसलाई नदेखाऊ पोज मैया
Posted by डिआर निश्छल at 5:24 AM 1 comment:
-अर्जुन राई दुङमेन
सदा दिल खुशी राखी कर्ममा जुट्नु है
बुढापाका बृद्धाहरुको आशिष लिनु है
कुँदेको चट्टान अनि मुर्तिलाई भन्दा
देवता जस्ता आमा र बाबालाई पुज्नु है
लाखौं तारामण्डलको एक आकाश जस्तै
जन्मभूमिको धर्तिमा वीर सपुत बन्नु है
चर्किन्छ धर्तिको माटो होइन्छ वारीपारी
हृदय देखि भाइ-वन्धुत्वको जालो बुन्नु है
ढुंङ्गामाटो र हावापानी मुटु मिची रुन्छन्
यि साह्रा सिंगो राष्ट्र जोड्न, मनमा गुन्नु है
लोभीपापी र हत्या हिंसाले ढाक्दैछ देश
गाउँ-गाउँबाट उठी शान्तिको बिगुल फुक्नु है ।
हाल: बगदाद, ईराक
Posted by डिआर निश्छल at 5:19 AM No comments:
छल कपट गर्ने सँग नसकिँदो रैछ हजुर,
सर सापट गर्ने सँग नसकिँदो रैछ हजुर ।
जोगाएर राखे पो त काम लाग्छ अनिकालमा,
सधैं खपत गर्ने सँग नसकिँदो रैछ हजुर ।
बल्ल बल्ल उन्को बचन हार्न नसकेर दिएँ,
साह्रै आपत गर्ने सँग नसकिँदो रैछ हजुर ।
भोलि फिर्ता गर्छु भन्छन् नानाभाँती कसम खान्छन्,
झुठो सपथ गर्ने सँग नसकिँदो रैछ हजुर ।
बर्षौँ भयो अझैपनि फर्काउने त कुरै छैन,
मनै जफत गर्ने सँग नसकिँदो रैछ हजुर ।
Posted by डिआर निश्छल at 5:09 AM No comments:
उदास यो मन तिमी बिना
म आँफैबाट टाढाछु रहर बिना
पिएर आशुँ मेटिएन प्यास
रितिदै गयो प्राण बीचको आस
लुटेको जिवन आँफैबाट
किन कसौ टाढा तिमी मबाट ?
भुल रहेछ जिन्दगी मेरो मलाई स्विकार्य छ
आफ्नै खुशीबाट झरेकी म, हरेक क्षण कालो छ ।
परिबर्तित गरूँ कसरी आफूलाई?
तिमीबाट खोसेर यो चिन्तित मनलाई ।
कोशीस गर्नेछु भुल्ने तिमीलाई
स्वार्थी नसम्झिदिनु बिन्ती मलाई ।
Posted by डिआर निश्छल at 4:44 AM No comments:
बिदेशीको ईशारामा चल्ने नेता हाम्रा
रकेश सुदले फु गरे ढल्ने नेता हाम्रा
राम्रो काम राम्रै हुन्छ जस्ले गरे पनि
अर्काको देखेर जल्ने नेता हाम्रा
धोती गाठेले सिमा सारी देशलाई खुम्चाउदा
केही भएको छैन भनी छल्ने नेता हाम्रा
अमृत भनी पठाउछन् जनताले सिंहदरबार
जति मलजल गरेनि बिष फल्ने नेता हाम्रा
हरुवा,डरुवा र छेरुवाको सरकार बनाउने
दिल्लीमा सलाइ कोरे बल्ने नेता हाम्रा
सुनेको थिए नेताहरु स्वाभिमानी हुन्छन तर
बिदेशीको काट्टोले बदल्ने हाम्रा नेता हाम्रा
म त तितेपाती
तिमी फूल लालीगुराँस म त तितेपाती
तिम्रो हातको पानी मिठो म त तल्लो जाती ।
बिहानीको घाम तिमी लामो यात्रा गर प्रिया
सन्ध्याको सूर्य म त हेर डुब्नै लागे प्रिया
हाम्रो माया छुटाउने समाज यो घाती
मनैभरी फुल्छौ तिमी म त सधैं तितो
मैले छुदा चोख्याउने फुकी पानी छितो
मुस्काउने दिन तिमी रातको म साथी
Posted by डिआर निश्छल at 3:41 AM No comments:
राँको सल्काउँदै ।
कसले ठान्छ भन
तिम्रो दरबार ठूलो
कसले मान्छ भन
हाम्रो संसार सानो
रङ्गिएको रातो गाथा
टेकी छाड्छौँ एकदिन
Posted by डिआर निश्छल at 11:14 AM No comments:
तिमी मेरो जिबनबाट छुटेपछी पो याद आयो,
बाचा कसम पनि सारा टुटेपछी पो याद आयो ।
एक बूँद आसुँ भित्र पनि प्राण हुँदो रैछ,
आज आफ्नै अश्रुघडा फुटेपछी पो याद आयो ।
तिम्रो चाहनाको शिखर मैले चढ्नु पर्ने थियो,
मनमा बेग्लै सगरमाथा उठेपछी पो याद आयो ।
प्रयाश्चितमा सोच्दै छु म,मेरै भुल थियो कि त ?
तिम्रो नाम अर्कै सँग जुटेपछी पो याद आयो ।
तिमी साथ भईन्जेल अति सुरक्षित थिएँ म,
आज सारा दुनियाँले लुटेपछी पो याद आयो ।
Posted by डिआर निश्छल at 10:57 AM No comments:
(भुजंगप्रयाद छन्द )
-पर्शुराम पराजुली 'पराशर'
मिलाई ब्यबस्था गयौ भोज खान
बडो शान्त राम्रो गुराँसे धरामा ।
उज्यालो खुसीको सबैले फिजाए
बनाए यही स्वर्ग नाचे नचाए । (१)
बजाएर बाजा गरे नाचगान
सबैले सुनाए अनेकौ तराना
म ता खालि खान्थें तमासा नियाल्थेँ
बजाएर ताली गुजारा चलाएँ । (२)
न कैल्यै कुनै गीत काही सुसेल्थेँ
न कैल्यै कुनै ताल दिन्थेँ र भुल्थेँ
तिमी नाच भन्दा सधै लाज मानेँ
भयो लौ न यो के हरे ! राम जाने !! (३)
लिई पुष्प गुच्छा उठाए सबैले
खुसीले उचालेँ दुबै हात मैले
घुमाएछु खुट्टा गरी हाउभाउ
ननाच्ने नाचेछु ताली बजाऊ । (४)
चरी चिर्र गर्दै जवानी उचालेँ
नदी चल्मलाए भरोसा दिलाएँ
सुसेलेर मैले कुनै गीत गाएँ
खुसीको नयाँ स्वाद पो चाल पाएँ । (५)
Posted by डिआर निश्छल at 10:16 AM No comments:
किसानले कुलेशो खनेको, कुलो सरी भयो जिन्दगी ।
लौ न रजनी कुलो यो सुक्यो, धुलो सरी भयो जिन्दगी ।
बग्न खोज्छ कुलेशो बिना, लछारियो तल छाँगा बनी
पसारियो छाँगा मुनी, मृत शब सरी भयो जिन्दगी ।
छहराका छाल सँगै बौढिन खोज्छ, मृत शब पनि
बगी दियो आर्यघाट तिरै, चिता सरी भयो जिन्दगी ।
थाँती रह्यो कल्पनाका महलहरु, पुरा गर्न पनि
चिता जल्यो शब सिद्दियो, खरानी सरी भयो जिन्दगी ।
ईमेल : arjun.bantawa@gmail.com
तिम्रो मन बहकियो नयाँ मान्छे देखेपछि
पुरानो मुल भुलिदियौ नयाँ खोला भेटेपछि
जति बेला निर्धो थियौ साथ दिएकै थिएँ मैले
अहिले सबै बिर्सी गयौ आफ्नो तिर्खा मेटेपछि
धेरै ठूला सपनामा लगाएको तिम्रो माया
पाएन फुल्न फल्न जिउदै घाटी रेटेपछि
घोप्टो मुन्टो चेपारे मुख पार्दै फेरि किन आयौ ?
के को 'राम राम' भन्दैछ्यौ भिरबाट घचेटेपछि
Posted by डिआर निश्छल at 9:53 AM No comments:
नेता बन्नुको के अर्थ ?
कुम्लो र कुटुरो बोकेर
जब अघि बढ्छु
आफै हाँस्छु आफैलाई देखेर
अनि धिकार्दै आफ्नै भाग्यलाई
रुन्छु पुर्पुरो ठोकेर ।
हार गुहार माग्न जाउँ बोल्दैन सरकार
बसेको छ मुखमा ताल्चा ठोकेर
आफ्नै जन्मभूमिमा छैन -
मलाई टेक्ने मेरो नाउँमा माटो
आज मेरो तमासा हेर्दैछ -
सधैं आफू हिंडेको बाटो ।
चुपचाप कसरी सहुँ ?
लालाबाला रुन्छँन भोको पेट मिचेर
हे दैब ! कस्तो मन हुन्छ त्यो कुर्सीमा बस्नेको
कहिल्यै दुख्दैन किन उसको त्यो मन ?
हाम्रो दुर्दशा देखेर ।
कहाँ गएर मागूँ नियाँ ?
आफ्नैले अन्याय गरेपछि
सतिले सरापेको देश मेरो
रावणको राज भए पछि ।
धिक्कार छ तिमीलाई नेपाली भै
नेपालीकै दुर्दशा हेर्छौं
चुपचाप छौ आफनै आँगनमा
अरुले नाङ्गो नाच नाँच्दापनि ?
कसरी भन्छौ 'नेपाली' भनी
बोल्दैनौ किन ?
आफ्नै चेली माथि गिद्दहरु
आँखै अगाडि झुमिदा पनि ।
आफ्नो पेट्को मात्र
चिन्ता तिमीलाई हो भने
तिमी नेता बन्नुको के अर्थ ?
त्यो सुख र सुबिधालाई मात्र हेर्छौ भने ।
के नै अर्थ भयो र मान्छे भैं जन्म लिनुमा
जन्मनुको कुनै औचित्य हुन्न
अरुलाई रुवाएर खानुमा ।